🥇 ▷ Qalabkaan wuxuu daabacay sawirro Polaroid iyadoo la adeegsanayo shaashadda taleefankaaga ✅
Qalabkaan wuxuu daabacay sawirro Polaroid iyadoo la adeegsanayo shaashadda taleefankaaga
Fikradda ah keenista sawir-gacmeedka mashiinka polaroid-esque adduunka meesha casriga ah Waxay umuuqataa inay ku filan tahay in la qabto sawirro mar walba iga dhigaya kuwo xiisa leh.
Waxaad ku xiraysaa daabacaad yar taleefankaaga casriga ah sawirada yar-yarna waa lagaa qaadayaa kuwaasoo ku siinaya dhammaan dareennadaadii hore. Polaroid Lab wuxuu isku dayaa inuu raaco isla fikradda, laakiin leh qallooc.
Shaybaarka ‘Polaroid Lab’ wuxuu adeegsadaa iftiinka ka soo gala taleefankaaga casriga ah!
Shaybaarka Polaroid Lab (oo ka yimid Polaroid Asalka) waa aalad qaab-dhismeed leh oo qaadaysa sawirro Polaroid iyadoo la adeegsanayo iftiinka shaashadda taleefankaaga casriga ah.
Qalabka wuxuu isticmaalaa iftiinka iyo muraayadaha si uu ugu daabaco sawirrada isla markiiba. Shaqadu way fududahay; muraayadaha iftiinka ka soo baxa muraayadda isla markaana muuqaallo muuqaal ah ayaa la sameeyay.
Sidee buu u shaqeeyaa Polaroid Lab?
Waxaad ubaahantahay inaad ka furto sawirka barnaamijka Polaroid-ka saaxiibbada ah, ku dhejiso taleefankaaga casriga ‘Polaroid Lab’ oo guji batoonka casaanka dushiisa. Fudud
Daqiiqado kadib, sawirro dijital ah ayaa soo baxay. Waxay qaadataa dhowr daqiiqo in la horumariyo oo waxaad helaysaa sawirro daabacan oo muuqaal ah. Waxaa sii dheer, waxay adeegsaneysaa taxanaha i-Nooca iyo 600 filim si shaqada loo qabto.
Halkan waxaa ah muuqaal si aad u aragto sida Polaroid Lab uu u shaqeeyo:
(kuxiran) https://www.youtube.com/watch?v=EUVq7adbDsQ (/ embed)
Qalab noocee ah ayaa la jaan qaada Polaroid Lab?
Polaroid Lab wuxuu la jaan qaadayaa Samsung, OnePlus, Huawei iyo aaladda Google Pixel. Marka lagu daro aaladda Android, aaladda waxay la shaqeysaa iPhone 6S iyo wixii ka sareeya.
Waxay diyaar u noqon doontaa iibsashada, laga bilaabo Oktoobar $ 129.
Shaybaarka ‘Polaroid Lab’ ma fiicnaan doonaa?
In kasta oo Polaroid Lab uu ina siinayo dareenka ah in lagu dhufto fikradaha cusub, dib u dhac ku yimaadda daabacadaha sawirradan, guud ahaan, waa soosaarista sawirrada oo aan sidaa u sii caddeyn. Waxaan hubiyay HP Sprocket oo tayada muuqaalku way i dhibtay.
Si kastaba ha noqotee, aaladdaani waxay cadeyneysaa inay tahay mid lagu raaxeysto kuwa wali jecel fikradda Polaroid waana hab farxad leh oo lagu helo sawirro muuqaal ah.